Divinity - MYSTERY ZILLION
saturngod နှင့် လူပျိုကြီး မင်္ဂလာဆောင်ပြီ။	နယ်စပ်မှာ ငလျှင်လှုပ်တာ ကို Alexender ကြီးကို ထိသွားသကိုး :P
Raid ဘယ်လိုဆင်ရမလဲ	Hardware RAID အတွက်က RAID controller လိုပါတယ်။ PCI card ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ IDE / SCSI / SATA harddisk အမျိုးအစားပေါ်လိုက်ပြီးရှိပါတယ်။ သူ့မှာ mother board က BIOS လိုမျိုး ROM တစ်ခုပါပါတယ်။ ROM မှာပါတယ့် firmware ကနေ RAID configure လုပ်ရပါတယ်။ ဘယ်လို လ…
"ccna လက်မှတ်သက်တမ်း"	ကျနော်က နောက်လေးလဆို expire ပြီ ။ Expire မဖြစ်ချင်ရင် CCNP ဆက်ဖြေပါ ။ ကျနော်သိသလောက်တော့ CCNP အတွက် စာမေးပွဲ တစ်ခုဖြေရင် CCNA validity ကို တစ်နှစ် extend ပေးပါတယ်။ ဒီတစ်နှစ်အတွင်း CCNP ရဲ့ နောက် exam တစ်ခုထပ်ဖြေရင် နောက်တစ်နှစ်ထပ်ရတာပေါ့။ CCNP ex…
name server ဘယ်လို ပေးရမလဲ...	sevenlamp said:(2) www.domain.co.cc ကိုလည်း ခုနကလိုပဲပေးရင်လည်းပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း Type မှာ CNAME ၊ value မှာ domain.co.cc လို့ပေးပါ။နံပါတ် (၂) က မအိုကေဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ နံပါတ် (၁) ကတော့ အဆင်ပြေသွားပြီ။ domainname.co.cc ဆိုရင် ခေါ်လို့ရတယ်။ www.doma…
On-Line Discussion	Conference လိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတာလားဗျာ။
သူများတွေကလည်း ကိုယ့်မျက်နှာလေး မမြင်ရ၊ ကိုယ်ကလည်းတခြားလူတွေ မျက်ခွက်ကြီး မမြင်ရနဲ့ နည်းနည်းတော့ feel ကွေးမှာပေါ့။ :D:D
name server ဘယ်လို ပေးရမလဲ...	တစ်နေရာရာက hosting ယူထားတာမဟုတ်ပဲ co.cc domain name ကို ကိုယ့်ဟာကို setup လုပ်ထားတယ့် server IP ကို point လုပ်ချင်တာထင်တယ်။ A record setup လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ co.cc က Nameserver နေရာမှာ recommended web hosting checkbox checked ပေးလိုက်ပါ။ ns1.webh…
ubuntu မှာ	Tsuna lade said:ဟုတ်ကဲ့ အကို web surfing အတွက် IPV6 ကနေ IPV4 ပြောင်းတာကဘယ်မှာပြောင်းရတာလဲမသိ browser မှာလား
network manager မှာလားမသိ
Menu.lst မှာ ipv6.disable=1 လို့ထဲ့ပေးရမယ်ဗျ။ Menu.lst ထဲက boot stanza မှာ splash ကိုရှာ splash ipv6.diable=1 လို့…
Real Time Backup လုပ်ချင်လို့...	kolynn86 said:ကျွန်တော် Local မှာရှိတဲ့ webserver တစ်ခု mirror လုပ်ချင်လို့.. သဘောကဗျာ... webserver တစ်လုံးရဲ့နောက်မှာ.. backup အနေနဲ့.. နောက်ထက် server တစ်လုံးက.. မူရင်း webserver အတိုင်းအလုပ်လုပ်ချင်တယ်... မူရင်း webserver မှာ update လုပ်လိုက်တယ်…
ွGmail Gtalk sign in	(.) တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ tips and trick အနေနဲ့ istein ရေးခဲ့တာရှိပါတယ်။ နဂို link ကိုပြန်ရှာပေးလိုက်တယ်။ http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=2355
Network Printing ထုတ်ရင် ........	Alexander said:user ကသူကိုယ်တိုင်လေဗျာ ..... :))
Alexander said:အချွန်နဲ့မပြီ .. ဆရာသမားကတော့ .... ကျနော် တကယ် DTP ကို သိပ်မရဘူးဗျ .... နောက်တာပါဗျာ။ DTP ကတော့ဗျာ ကျနော်တို့နဲ့က နည်းနည်းဝေးပါတယ်။ Network နဲ့ MS o…
Network Printing ထုတ်ရင် ........	moethethtar said:Excel File တွေသုံးရင်ပဲလေးသွားတာရှင့်။ တခြား ဘာ Program မှ မလေးသွားပါဘူး။ Word တောင် မလေးဘူး။ Excel မှာတောင် Link ချိတ်ထားတဲ့ဖိုင်တွေပဲလေးတာပါ။ ရိုးရိုး Excel ဖိုင်တွေ၊ အသစ် Excel ဖိုင်တွေက မလေးဘူးရှင့်။
CPU Load များတာတွေလဲမရှိပါ…
Network Printing ထုတ်ရင် ........	moethethtar said:မိုးသက်ထားရဲ့ရုံးမှာ ပရင်တာလေးတစ်လုံးကို Network share ပေးပြီး Wireless ကနေ ထုတ်ကြပါတယ်။ စက်အားလုံးအဆင်ပြေပေမဲ့ တစ်လုံးက ပြဿနာရှိနေတယ်။
အဲဒီစက်မှာ Wireless Printing setup လုပ်လိုက်ရင် Print ကတော့ထုတ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီစက်မှာ ရ…
ubuntu နဲ့wifi သုံးချင်လို	Tsuna lade said:ubuntu နဲ့wifi သုံးချင်လို ့ကူညီကြပါဦး အစကတော့ကျွန်တော်သုံးတာသုံးလို ့ရတယ် နောက်ပိုင်းကြတော့မရတော့ဘူး ဖြစ်ပုံကအဲဒီ wifi hotspot က တစ်နေ ့တစ်ခါ password
ပြောင်းတယ် အဲဒါကျွန်တော်က နေ ့တိုင်းချိန်းသုံးတာကို ပထမဆုံးတစ်နေ ့ကအဆင်ပြေတယ်…
GRUB Loading Error 15	Kernel update လုပ်လိုက်လို့ပါ။ Kernel နှစ်ခု side by side ရှိနေလို့ နှစ်ခုလုံးပြနေတာပါ။ မလိုအပ်ရင် မဖျက်ပါနဲ့ comment ပိတ်ရင် ပိတ်လိုက်ပါ။ အခုဒီ new kernel version နဲ့ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် version အဟောင်းရဲ့ instant နှစ်ခုကို comment ပိတ်လိုက်ပါ။ ဒါမှ…
What is FTP cable	လူပျိုကြီး said:အဂလိုလုပ်ပါ မေးတာနဲ့ ဖြေတာတွေ လွဲကုန်ရော ကြည့်ရတာ အမေးအဖြေ Protocol တွေလွဲကုန်တာ ဖြစ်မယ် :D
သေချာစဉ်းစားရမှာပျင်းရင် အရင်ဖြစ်သလိုလေးဖြေထားတက်လို့ပါ။ စိတ်မရှိပါနဲ့ ။ :P:P
အဲဒါကြောင့် အပြင် Shield ပါတဲ့ကောင်ဆိုရင် Ground Connector က…
HP LaserJet ပြဿနာလေး	Toner များလဲသေးလားဗျာ ? Black toner cartridge က error ဖြစ်နေတာပါ။ Low cartridge ဖြစ်နေရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Faulty တော့မဟုတ်လောက်ဖူး print ထွက်သေးတယ်ဆိုတော့။ HP brand toner မဟုတ်ရင်လည်း 10.xx.xx error တက်တယ်။ နည်းနည်း ကလိကြည့်လေ တစ်ခြား error မဖြစ်တယ…
What is FTP cable	ဪ termination တွေဘာတွေပြောသွားလို့ terminator နဲ့မှားသလားလို့ပါဗျာ။ :P ဘာကိုပြောမှန်းမသိလို့၊ နောက်ရုတ်တရက် ခေါင်းထဲပေါ်မလာလို့ရောပြီး ပြီးစလွယ်ဖြေလိုက်မိတယ် sorry ဗျာ :P။ STP data connector က လည်း RJ-45 ကို Metal layer အပြင်မှာတစ်ခု၊ အထဲမှာ shiel…
Torn City အကြောင်း	ဘယ်သူမှ level စိတ်ဝင်စားမယ်မထင်ဘူး။ Battle stats , days old , properties , asset list (items), money in hand ။ ဒါတွေပြောရင် စိတ်ဝင်စားမယ် :P
What is FTP cable	လူပျိုကြီး said:အဂလိုလား သိဘူးလေဗျာ ဝီကီမပေါ်ခင်က စာအုပ်ထဲပဲ မြင်ဖူးတာဆိုတော့ STP အမျိုးမျိုးကွဲမှန်းသိဘူးဗျ။ ထပ်မေးဦးမယ် စိတ်ဝင်စားသွားပြီ4pairs လုံးကိုအုပ်ထားတဲ့ကောင်ကတော့ Termination ခေါင်းတွေကလည်း STP ခေါင်းတွေပဲ သုံးတယ်လေ အဲဒါတော့မြင်ဖူးတယ် p…
What is FTP cable	လူပျိုကြီး said:မျက်စေ့ကိုလည်သွားတာပဲ အရင်ကတော့ STP လို့ခေါ်တာပါ Shield Twisted Pair အဲဒါကို Grid Shield မဟုတ်ပဲ Foil Shield ဖြစ်သွားလို့ FTP ခေါ်တာလားဟင် အခေါ်အဝေါ်ပြောင်းတာသိဘူးဗျ။ :D
စကားမစပ် ထပ်မေးရရင် အဲဒါကိုသုံးတယ်ဆိုတော့ Ground System စနစ်တက…
What is FTP cable	Foiled Twisted Pair ပုံနဲ့စာနဲ့ Link လေးနှစ်ခုပဲ ပေးလိုက်တော့မယ်နော်။ http://searchsoa.techtarget.com/sDefinition/0,,sid26_gci212163,00.html
Ubuntu Vs Red Hat ပြိုင်ပွဲ	mgpyone said:Red Hat က မြန်မာနိုင်ငံမှာမို့ ဿFree ရသလောက်ဖြစ်နေတာပာ နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့ Commercial ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝယ်သုံးရပာတယ်.. အဲဒီအတွက်ကြောင့် Free Version ဖြစ်တဲ့ Fedora ( fedoraproject.org ) ကို ထုတ်ထားပာတယ်
Just my curiosity bro. Could w…
Torn City အကြောင်း	အခု torncity မှာ stats အမြင့်ဆုံးက ဘယ်လောက်လောက်ရှိနေပြီလည်းသိလား ? 300m လောက်တော့ဖြစ်နေလောက်ပြီထင်တယ်။ မကစားဖြစ်တော့တာ နှစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီ။ Acct တော့ delete မဖြစ်အောင် သတိရရင် ဝင်ဝင်ကြည့်တယ်။ :P
လင်းနက်စ်ကို ဘာကြောင့်သုံးသင့်လဲ	yeman said:အင်း... ဆော့၀ဲလ်တွေတော့ တစ်ခါတည်း upgrade လုပ်လို့ရတယ်။ အင်တာနက်လိုတယ်.. (တေတာပဲ :'( ) Windows မှာတော့ Windows တစ်ခုထဲ Upgrade ဖို့တောင် Internet မလိုဘူးလားဗျာ ? yeman said:မြန်မာနိုင်ငံမှာ တခြား OS တွေ မသုံးတော့ပဲ Linux ပဲ သုံး…
လင်းနက်စ်ကို ဘာကြောင့်သုံးသင့်လဲ	yuri said:ကိုစေတန် ကျွန်တော် လင်းနစ်ရဲ့run command လေးတွေသိချင်ပါတယ် ဆောဖ့်၀ဲလ်သွင်းမယ်ဆို၇င်
C ထဲကို သွားမှတ်အောင်ဘယ်လိုရိုက်တာ နောက် တစ်ခြားလိုအပ်တဲ ့run command လေးတွေကော
ပြောပြပေးပါလား လေ့လာချင်လို ့ပါ :):)
Linux မှာ run တို့ C တို့မရှိဘူးလေ။…
လင်းနက်စ်ကို ဘာကြောင့်သုံးသင့်လဲ	It mean, developer have no choice platform. If you areaplatform dependent application developer likes you said, you would need to use their platform and obey them; yeah no choice. Microsoft and Apple would never have intention to give freedom to…
ဒေါင်းလုပ်နှုန်း	Mit ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ အဲလိုသုံးချင်ရင် သင်တန်းသွားတက် :67:
GRUB Loading Error 15	Windows ကို default မပေးထားတာတောင် Ubuntu ပေါ်ကိုမရောက်တာ။ Windows က default တက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ စူဠလိပ်ဆီက linux အကြောင်းမေးသံ ပိုပြီး ကျဲပါးတော့မယ်ထင်တယ်။ :):)
ဒီအတိုင်းလည်း မသုံးဖြစ်လောက်ရင် Windows ထဲမှာပဲ VirtualBox နဲ့ သုံးပါလားဗျာ။ အခုဆို du…
Mz ဉာဏ်စမ်း	MayKyaw said:နောက်တစ်ခု ထပ်မေးကြည့်မယ်နော် .... ပျားအုံတစ်အုံမှာ ပျားဘုရင်မတစ်ကောင်ရယ်၊ လုပ်သားပျားမများစွာရယ်၊ ပျားထီးအနည်းငယ်ပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ သူငယ်ချင်းတို့ သိကြပါတယ်။ အဲ........လုပ်သားပျားမလေးတွေက ဥမဥကြဘူးတဲ့ (အပျိုကြီးတွေ ထင်ပါရဲ့ :P) ပျားဘုရင်မ…
php.ini and hosting	File path က /etc/php.ini ဖြစ်တက်တယ်။ Permission မရှိရင် ကိုယ့် httpdoc ထဲမှာတင် .htaccess နဲ့ပေးလို့ရတယ်ထင်တယ်။ Put this line in .htaccess and save it. php_value upload_max_filesize 1024M Comment by Divinity
Ubuntu Vs Red Hat ပြိုင်ပွဲ	ကို box မမြင်တာကြာပေါ့။ Gentoo စမ်းဖြစ်ပြီလား ကို box ။ Distro တွေကိုတင်ယှဉ် ကြည့်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျ။ ကျနော် laptop တစ်လုံးမှာ CentOS 5.3 နဲ့ Debian 5.0 ယှဉ်တင်ထားတယ်။ ဘယ်ဟာပိုကောင်းလည်း မေးရင်တော့ ပိုကြိုက်တာ ပိုကောင်းတာပေါ့။ RPM vs DEB ဆိုရင်တော့ rp…
Mz ဉာဏ်စမ်း	မှန်တယ်ဆိုမှ ဆရာဝင်လုပ်တယ် မထင်ပါနဲ့။ ဖြေသွားတယ့်လူက ပြန်ပေါ်မလာမှာစိုးလို့ Fibonacci ကိန်းတန်းပဲ။ ရှေ့နှစ်လုံးပေါင်းရင် တတိယ ဂဏန်းကိုရတယ်။ တစ်နှစ်စာဆိုလည်း တွက်လို့ရတယ်။ ငါးနှစ်ဆိုလည်း ဆက်ပေါင်းသွားရုံပါပဲ။
12358 13 21 34 55 89 144 သူလည်း …
Mcad နဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးချင်ပါတယ်။	Mcad ဆိုတော့ AutoCAD လိုဟာထင်လို့ ဝင်မကြည့်မိတာ Microsoft Certified Application Developer ကိုပြောတာထင်တယ်နော်။ MCAD တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ Exam သုံးခုဖြေရပါတယ်။ Web applications development or Windows applications development အတွက် exam တစ်ခု၊ One …
အခုလောလောဆယ် အဲရာများ	Database config ကတော့ config directory အောက်မှာရှိတာများပါတယ်။ Database username/password ပါတဲ့ config file က config/dbconfig.php ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ မဟုတ်ရင် config/user.config.php ဖြစ်နိုင်တယ်။ :67: :67:
အခုလောလောဆယ် အဲရာများ	Error အရကတော့ Username က upload ဖြစ်နေတယ်။ 'upload'@'localhost'
DB connection အတွက် parameter တွေပေးထားတယ့် နေရာတော့ ရှိမှာပါ။ Common ကတော့ configuration.php / setting.php / connection.php ဆိုတယ့် နာမည်မျိုးဖြစ်မယ် ။ ဒီ page ရဲ့…
မေးခွန်း -- Multiprocessor	Unix mainframe တွေတုန်းက mainframe တွေကို thin client တွေနဲ့ လှမ်းသုံးတာကိုပြောတာထင်တယ်။ Thin client တွေက hard disk နဲ့ memory မပါဘူး။ Display and interaction purpose only ပဲ။ File တွေ Application တွေကလည်း mainframe ပေါ်မှာ ၊ Run ရင် memory ကလည်း…
Mz ဉာဏ်စမ်း	Post count တက်လို့ မရေးတော့ဘူးလို့ နေတာ ၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံ အားနည်းတယ်ဆိုလို့ ဒီတစ်ခါတော့ စာရွက်ပေါ်ချရေးကြည့်လိုက်တယ်ဗျာ။ ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးထဲ့တွက်နေရင် စိတ်တွက်တွက်ဖို့ ခေါင်းက အဲလောက် processing မကောင်းဘူး။ ခဏခဏပေါက်ကရတွေပြောနေရတာလည်း မကောင်းဘူ…
Mz ဉာဏ်စမ်း	sevenlamp said:၁- တစ်၀က်စီ ထည်ပြီး ချိန်လိုက်မယ်ဗျာ... ၆ - ၆
၂- ပိုပေါ့တဲ့ ၆ ပြားကို နောက်တစ်ခါ တစ်၀က်စီ ထပ်ချိန်မယ်.. ၃ - ၃
ဒါဆို ပိုပေါ့တဲ့ ၃ ပြားကျန်မယ်ab c ဆိုပါတော့
၃-aနဲ့bချိန်မယ် ၄- ပိုပေါ့တဲ့ ဟာနဲ့ c နဲ့ ချိန်မယ်၊ ပိုပေါ့တဲ့ ဟာက ဒ…
Mz ဉာဏ်စမ်း	Dr.know said:Try again ! Please မှားသွားတယ်ဗျ
ငါးကြိမ် ။ သုံးပြားဆီ ချိန်ရမှာ နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်
သုံးပြားဆီ သုံးခါချိန် 123 ---456123 ---78 9
အလေးချိန်မတူတာပါရင် အဲအစုမှာ အတုပါတယ်။ 1 ,2 ,3ဆိုရင် အဲသုံးခုကို ပြန်ချိန် 1 -- 2…
Mz ဉာဏ်စမ်း	Dr.know said:ဒီတခါတော့တော်တော်လေး စဉ်းစားရမဲ့မေးခွန်းကို မေးပါမယ် ။ ( အလွယ်ကြိုက်သူများ ဖြေရန်မလိုပါ ) ။
သချင်္ာဉာဏ် နှင့်အတွေးအခေါ် တော်တော်ကောင်းမှ ဒီမေးခွန်းကိုဖြေနိုင်မှာပါ ။
ဒီမေးခွန်းကို ဖြေနိုင်ဖို ့ရာ စိတ်ရှည်ရမည် ။ စိတ်ဓါတ်ခိုင…
GRUB Loading Error 15	Tsuna lade said:အကိုရေအဆင်မပြေဘူး မပြေတာကဒီလို edit လုပ်ပြီးရင် save လုပ်လို ့မရဘူး error message ပြနေတယ်
Read only file ဘာညာဆိုပြီးတော့ ထင်တrယ်နော်။ Ubuntu ဆိုတာ ကျနော်မေ့သွားတယ် :P:P
sudo နဲ့ ပြင်ရင်ကို မရတာလား ? GUI ပေါ်က ရချင်မှ ရလိမ့်မယ် bro…
ubuntu မှာ	Command Line download မှာတော့ axel ဆိုတာရှိတယ် ။ Multi download session ယူပြီး ဆွဲတယ်။ ပုံမှန်ထက်4ဆလောက်ပိုမြန်ပါတယ်။ UI tools တွေတော့ ကျနော်မစမ်းဖူးဘူး။ Axel အကြောင်း installation တွေဘာတွေကတော့ သူများရေးထားတာကိုပဲ point လုပ်လိုက်တော့မယ်။ http…
Mz ဉာဏ်စမ်း	Dr.know said:
သိုးအရေအတွက်သည် ကြက်အရေအတွက််ထက် နှစ်ဆရှိလျှင် ထိုအုပ်စုတွင်ရှိနေသည် ့သိုး နှင့်ကြက် ကောင်ရေ ကိုရှာပါ ။
သိုးအရေအတွက်က ကြက်ရဲ့ နှစ်ဆရှိနေရင် မေးခွန်းမပြေလည်ပြန်ဘူး ။ အပိုင်းကိန်းတွေ ထွက်ကုန်လိမ့်မယ်ဗျ ကြက်အရေအတွက်က သိုးနှစ်ဆရှိ…
ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးကြပါ	nyochawlay said:ကျွန်တော် ဒီနေအကြောင်းအရာလေးကို ဘယ်နားမှာ မေးရမှန်းမသိတာနဲံ ဒီနေရာမှာ ပေးလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖိုရမ်မှ ညီအကိုများခင်မျာ အခု ကျွန်တော်ပြဿလေးတစ်ခုရှိလို့ မေးချင်လို့ပါ။ဘာလဲဆိုရင် ကျွန်တော် Red Hat OS နဲ့ windows xp တင်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်…
Mz ဉာဏ်စမ်း	thar5oe said:ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်လဲ ဒိကိစ္စအရစ်ခံရဖူးလို့ပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်မရှင်းဘူးဗျ ဘယ်ကိစ္စကိုပြောတာလည်း :):)
Mz ဉာဏ်စမ်း	Law Shay said:နည်းနည်း ထပ်ဖြည့်မယ်နော်။
ပထမ ညီမျှခြင်းကa- 1 =b+ 1 -->a=b+ 2
ဒုတိယ ညီမျှခြင်းကa+ 1 =2(b- 1) ပထမညီမျှခြင်းကို ဒုတိယ ညီမျှခြင်းထဲ အစားသွင်းခြင်းဖြင့် ခင်ဗျား ပြောတဲ့ အဖြေရပါတယ်။
အဲဒီ post ရေးတုန်းက ကျနော်နည်းနည်း…
Mz ဉာဏ်စမ်း	ကိုသားဆိုးရေ ဘယ်လိုမှတော့ သဘောမထားပါနဲ့ Installation တစ်ခုကို စောင့်နေရလို့ အားနေတယ်ဗျာ။ နည်းနည်း ငြင်းမယ်။ အကိုက ဒုတိယတန်း Math လို့ပြောရင် ကျနော် KG နည်းနဲ့ပြောမယ်။ :P:P
အကို Variable values အတိုင်းကျနော် အရင် တွက်ပြမယ်နော။ A မှာ သုံးကောင် = …
Mz ဉာဏ်စမ်း	Dr.know said:ငှက်အုပ်စုနှစ်စု ပျံသန်းရင်း တွေ ့ဆုံကြတဲ ့အခါ တဖက်နဲ ့တဖက် မေးမြန်းကြတယ်လေ ။ အုပ်စု A ခေါင်းဆောင် > вЂњ ဟေ့မင်းတို့ဘယ်နှစ်ကောင်ရှိသလဲ вЂќ ဟု အုပ်စု B ကို မေးတယ် ။
အုပ်စု B ခေါင်းဆောင် > вЂњ တို ့တူ ၊ တို ့ခွဲ ၊ တို…
Mz ဉာဏ်စမ်း	thar5oe said:dr.know ရေ
a+1 = 2b
a-2b = -1
(a ကိုခြေချင်တဲ့အတွက် - နဲ့ မြှောက်လိုက်တယ်)
a - 2b = -1
-a+b= -1
-b = -2 b=2( - ချင်းခြေလိုက်ပါတယ်)
a = 3, b= 2
Mz ဉာဏ်စမ်း	dr.know said:ပန်းခြံတခုမှာ သစ်ပင်aနှင့်သစ်ပင်bဆိုပြီး သစ်ပင်2ပင်ရှိသည် ။ သစ်ပင်2ပင်လုံးမှာ ငှက်တွေ နားနေကြတယ် ။ သစ်ပင်aမှာနေတဲ ့ငှက်က သစ်ပင်bမှာနေတဲ ့ငှက်ကို လှမ်းပြောလိုက်တယ်။
သစ်ပင်aငှက် > သင်တို ့အထဲက တကောင်လာရင် ငါတိ…
267 Powered by Vanilla